မြဝတီမြို့ မဲ့ထော်သလေး ကျေးရွာတွင် သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းပါး နေရာများ ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ပြို - Yangon Media Group
မြဝတီမြို့ မဲ့ထော်သလေး ကျေးရွာတွင် သောင်ရင်းမြစ်ကမ်းပါး နေရာများ ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ပြို
မြဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃ဝ
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီခရိုင် မြဝတီမြို့ မဲ့ထော် သလေးကျေးရွာတွင် သောင်ရင်း မြစ်ကမ်းပါးနေရာများ ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ပြိုကျမှုများရှိနေ ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ မြစ်ကမ်းပါး ပြိုကျမှုများကြောင့် ဦးအပြ၏ ခြံတွင် အလျား ပေ ၁၅ဝ၊ အနံ ပေ ၂ဝ၊ ထု ပေ ၂၅၊ ဦးအိုက်အင်၏ ခြံတွင် အလျား ပေ ၁ဝဝ၊ အနံ ပေ ၃ဝ၊ ထု ပေ ၂၅၊ ဦးနံမာ၏ ခြံတွင် အလျား ပေ ၁၅ဝ၊ အနံ ပေ ၃ဝ၊ ထု ၂၅ ပေ ပြိုကျ ပျက်စီးခဲ့ပြီး ဦးနံမာ၏ ဆန်စက် ဟောင်း အဆောက်အအုံအားလည်း ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။
အဆိုပါ မြေကမ်းပါး ပြိုကျရာ နေရာများသို့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထူးလွင်၊ ကရင်ပြည်နယ်လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန့်ဇင် အောင်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဖြိုးဇော်ကိုကို၊ မြို့နယ်လမ်းဦး စီးဌာနမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဦးထွန်း ဝင်းမြင့်၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ် ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ကရင်ပြည်နယ် ဒေသ (၁၁)ဘားအံမှ အငယ်တန်း အင်ဂျင် နီယာ(၂) ဦးဇင်ကိုကို၊ ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိ သူများက ဇူလိုင် ၂၉ ရက်ကသွား ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ထိုသို့ စစ်ဆေးရာ ခရိုင်အုပ် ချုပ်ရေးမှူးက နေအိမ်ရှိနေသည့် ခြံရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့နေအိမ် ကို အချိန်ရှိတုန်း ပြောင်းရွှေ့ထား စေလိုကြောင်း၊ ပြောင်းရွှေ့မည်ဆို ပါကလည်း လိုအပ်သည်များ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းဖြင့်ပြောကြားပြီး မြေပြိုမှု အား ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများ အား ပေါင်းစပ်ဖြည့်ဆည်းဆောင် ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြဝတီမြို့အနေဖြင့် မြစ်ကမ်း ပါးထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရမည့် နေရာများအား ဦးစားပေးနေရာအလိုက် ရှစ်နေ ရာ တင်ပြထားခဲ့သော်လည်း မာမီ ဂိတ်တစ်ခုသာ လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ရန် ရန်ပုံငွေ ခွင့်ပြုရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဝေဖန်မှုများကို လက်ခံပြီး လူသစ်တစ်ဦး ဖြစ်လိုကြောင်း နေမာ ဖွင့်ဟ
လမ်းများ မကြာခဏ ပျက်နေမှုနှင့် BOT ကုမ္ပဏီတို့၏ စာချုပ်ဖောက်ဖျက်မှုကို ထိရောက်စွာ အရေးမယူခြင်း??
အမှန်တကယ် ကျသင့်သည့် ဖုန်းဘေလ်ထက် ပိုမိုဖြတ်တောက်နေခြင်းကို သုံးစွဲသူများ မကြာခဏ ကြုံတွေ့
အိုင်ကာဒီ ကို ချန်လှပ်ခဲ့တဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ တိုက်စစ် အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား
လက်ရှိ အောင်ဘာလေထီ လက်မှတ်များကို ယခင် နှစ်ကျပ်တန်ထီ စနစ်ကဲ့သို့ လက်ခံဖြတ်ပိုင်းဖြင့် ဆော??